Lọ ọrụ ginger - China Ginger Manufacturers and Suppliers
A na-eji ntụ ọka ginger na-eme ntụpọ ọka. Ebe ọ bụ na flakes flakes emeela nnukwu uru maka ahụike na ahụike nke ahụ, yabụ ị drinkingụ ntụ ntụ ginger nwekwara ike inye aka na ahụike. Yabụ, ginger ntụ ntụ na-eteta ụra, na-akwalite agụụ, nguzogide oxidation, igbochi akpụ, mgbochi ịka nká, oyi, gbochie ọrịa ngagharị, melite ogo ụra na akụkụ dị iche iche nke ọrụ na nsonaazụ. Ya mere maka ọrụ eriri afọ adịghị mma, agụụ na-adịghị mma, mgbaàmà siri ike, ụra na-ehi ụra, ntụ ntụ ginger bụ ụdị ezigbo nri & ọgwụ.
Enwere gingerol dị okpukpu anọ ma ọ bụ ise na-atụle ginger organic na ginger, ọ bụ ezie na ọ dị nro, ọ na-atọ ezigbo ụtọ. Ọzọkwa, organic ginger dị obere na fiber, ya mere ọ na-atọ ụtọ na ume ọhụrụ karịa mgbe ginger.
Jinja bụ mgbọrọgwụ nke na-esi ísì ụtọ na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ! ginger ohuru bu isi uto na otutu nri asia. Maka ọtụtụ mmadụ ginger na-eri obere obere ka enwere ike iwere ya dị mkpa maka ụtọ ya karịa uru oriri. Jiri ginger maka ekpomeekpo na fries, salads, ofe na marinades. Tinye na nri na ngwụcha nri ka ginger tụfuru ekpomeekpo ya karịa ka ọ na-esi nri.
Nongchuanggang E-commerce Industrial Park (Weifang) Co.